मनोरञ्जन Archives - Page2of 65 - Peacepokhara.com
धितालमा ल्होसार मेला शुरु
कृष्ण दवाडी २३ पुष २०७६, बुधबार ०८:००0हेरिएको
हेमजा, २३ पुष। माछापुच्छे« गाउँपालिका–६, धिताल, हेम्जाकोट स्थित जय बराह युवा क्लवको आयोजनामा आजदेखि पुसे पन्ध्रम तथा ल्होसार मेला सुरु भएको छ । मेलाको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बरालले होमस्टे व्यवस्थित गरी पर्यटन प्रवद्र्घन गर्नुपर्ने बताए ।उनले धिताल कोइलीकोट, हेम्जाकोट जस्ता कोटैकोटको संगम स्थल भएकाले पर्यटकको आक्रर्षण केन्द्र ... थप पढ्नुहोस्
मेरो डान्स र मेरो भ्वाइस कपको उद्घाटन शनिवार,चर्चित गायक गायीकादेखि नायक नायीका आउने
पिस पोखरा १३ पुष २०७६, आईतवार ०१:००0हेरिएको
ओहायो । अमेरिका र क्यानडामा रहेका नेपाली प्रतिभा प्रष्फुटन गर्न एक साथ दुई प्रतियोगिता आयोजना गरिने भएको छ । मेरो डान्स कप र मेरो भ्वाईस कपको नाममा दुई (गायन र नृत्य) प्रतिभाका लागि एकसाथ प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागिएको हो । इन्टरनेशन वेलफियर एण्ड सपोर्ट फाउण्डेशन अफ अमेरिका नामक संस्थाको आयोजनामा ... थप पढ्नुहोस्
लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई विरामीको रुपमा हेर्न रिकभरिङको माग
कृष्ण दवाडी ८ पुष २०७६, मंगलवार ११:००0हेरिएको
पोखरा,८ पुस । लागुऔषध उपचार तथा पुनस्र्थापन केन्द्र हरूको छाता संगठन (रिकभरिङ) नेपालले लागु औषधको प्रयोगकर्ताहरुलाई विरामीको रुपमा हेनुपर्ने माग गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उसले लागुपदार्थको सेवनकर्ताहरु अपराधी नभइ उनीहरु विरामीमात्र भएकाले त्यस विषयलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने माग रिकभरिङको रहेको ... थप पढ्नुहोस्
पोखरामा शुक्रबार फेशन सो हुने
कृष्ण दवाडी ३ पुष २०७६, बिहीबार १५:००0हेरिएको
पोखरा, ३ पुस । पोखरामा शुक्रबार हुने द फेशन सोको तयारी पुरा भएको छ । पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरि आयोजकले यसको तयारी पुरा भएको जनाएको हो । कला, संगीत र फेशनमा पोखरा बढाउन फेशन सो को आयोजना गर्न लागेको इभेन्ट म्यानेजर सनिज गुरुङ्गले बताए । ‘पोखरामा फेशन प्रति लगाव राख्ने ... थप पढ्नुहोस्
साहित्य महोत्सवमय बन्यो पोखरा
कृष्ण दवाडी २९ मंसिर २०७६, आईतवार ०२:००0हेरिएको
मंसिर २८, पोखरा । शुक्रबार सुरु भएको आइएमई नेपाल साहित्य महोत्सवको आठौं संस्करणको दोस्रो दिन शनिबार उत्तिकै उत्साहपूर्ण सहभागितामा विभिन्न सेसन सञ्चालन भए । शनिबारको पहिलो सेसन थियो, लोकगीत कि लोकप्रियता ? यो सेसनमा नारायण अमृतसँग गायक हरिदेवी कोइराला, प्रकाश सपुत र झुमा लिम्बूले छलफल गरे । यसमा विशेषगरी त्यो ... थप पढ्नुहोस्
पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषध सहित एक जना पक्राउ
कृष्ण दवाडी २६ भाद्र २०७६, बिहीबार १४:००0हेरिएको
पोखरा,२६ भदौ । पोखरा एक जना ठूलो मात्रामा लागूऔषध सहित एक जना पक्राउ परेका छन् । लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो पोखराको टोलीले आज पोखरा महानगरपालिका १४ चाउथेबाट पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका ५ महलबारी बस्ने वर्ष ५० का प्रल्हाद कोहारलाई अवैध लागू औषध सहित पक्राउ गरेको हो । उनका साथबाट बुर्फिनर्फिन १०० ... थप पढ्नुहोस्
कृष्ण दवाडी ५ भाद्र २०७६, बिहीबार १५:००0हेरिएको
पोखरा,५ भदौ । महिलाहरुको महानचाड तीजको अवसरमा पुष्पाञ्जली इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालीको आयोजना र इन्द्रेणी एकिकृत विकास केन्द्रको सह—आयोजनामा टुडिखेलमा हुने तीज मेलामा छेलो प्रतियोगिता हुने भएको छ । भदौ १४ गते हुने छेलो प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद रु ११ हजार प्रदान गरिने आयोजकले जानकारी गराएको छ । यस्तै, द्धितिय र ... थप पढ्नुहोस्
पिस पोखरा १ असार २०७६, आईतवार १४:००0हेरिएको
अमेरिका । अमेरिकामा म्युजीक अवार्डको आयोजना हुने भएको छ । अमेरिकाको न्यूओर्कमा सम्पन्न हुने गरी ‘वल्र्ड नेपाली म्युजीक अवार्ड न्यूओर्क २०१९’को आयोजना हुने भएको हो । यस अवार्ड नेपाली गीत संगीत क्षेत्रमा लागेका सर्जकहरुको प्रोत्साहन तथा सम्मानका लागी प्रदान गर्न लागिएको आयोजक वल्र्ड कनेक्सन यु.एस. इन्कले जनाएको छ । जम्मा ... थप पढ्नुहोस्
कृष्ण दवाडी ३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०९:००0हेरिएको
पोखरा, ३ जेठ । पोखराको भैरवटोलमा ‘श्री भैरव मन्दिर’को शिलान्यास भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले शुक्रबार मन्दिरको शिलान्यास गरे । अहिले भैरव साँस्कृतिक संरक्षण समितिको कार्यालय रहेकै ठाउँमा करिब २ करोडको लागतमा नयाँ मन्दिर बन्न लागेको हो । मन्दिर एक वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य रहेको छ । पोखरामा ... थप पढ्नुहोस्
कृष्ण दवाडी २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ११:००0हेरिएको
पोखरा, २ जेठ पोखरा महानगरपालिकाले वडा नम्बर २९ स्थित भण्डारढिक खेल मैदानमा खुल्ला व्यायामशाला बनाएको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै खुला ठाउँको अभाव भइरहेको बेला पोखरा महानगरपालिकाले नागरिकलाई स्वस्थ्य बनाउन खुल्ला व्यायामशाला निर्माणको काम सुरु गरेको हो। भण्डारढिकमा स्थापना गरिएको व्यायमशालाको बिहीबार पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले उद्घाटन गरे । यो ... थप पढ्नुहोस्